I-chip enhle kakhulu yezinja nokuba nesilwane sakho silawulwe kahle | Izinja Umhlaba
I-chip enhle kakhulu yezinja nokuba nesilwane sakho silawulwa kahle
I-chip yezinja ingumkhiqizo obalulekile wokukhonjwa kwesilwane sakho nokusheshisa nokwenza lula izinyathelo uma kwenzeka ulahlekile. I-chip eyazisa irejista futhi ejojowe ngaphansi kwesikhumba senja yethu ingafakwa kuphela kudokotela wezilwane, kepha, uma leli cala lenziwe, singaba nentshisekelo yokuqinisa ukuphepha kwenja yethu.
Ukuze wenze lokhu, Emakethe sithola imikhiqizo ethakazelisa kakhulu, amakhola we-GPS, esingazi ngawo ukuthi inja yethu ikuphi ngaso sonke isikhathi futhi ehlanganisa imisebenzi ewusizo kakhulu. Kulesi sihloko sikhuluma ngabo nokunye okuningi okuhlobene ne-chip. Ngaphezu kwalokho, sincoma nokuthi ubheke le enye indatshana emayelana nayo izinyathelo ezi-4 ezibalulekile lapho usebenzisa inja.
I-Tractive DOG GPS 4....
I-GoPetee Collar ...
Umfundi we-LBH Chip ...
Geevorks 134.2KHz Lector...
Ijika, isitholi se-GPS ...
1 I-chip enhle kakhulu yezinja
1.1 I-GPS enenethiwekhi yomhlaba wonke
1.2 Isifundi se-Pet chip
1.3 I-GPS enekhodi ye-QR
1.4 Isifundi se-chip esincane ne-compact
1.5 I-chip yenja ye-GPS
1.6 Ikhola le-GPS elihlala isikhathi eside
2 Yini i-chip yezinja?
3 Ukubaluleka kwe-chip
4 Ingabe kuphoqelekile ukukhomba inja yami nge-microchip?
5 Ungathenga kuphi amachips wezinja
I-chip enhle kakhulu yezinja
I-GPS enenethiwekhi yomhlaba wonke
Le locator esebenzayo noma i-GPS yezinja iyithuluzi elinamathela kukhola wenja yakho. Inemisebenzi eminingi epholile futhi ewusizo ngakho ungalahlekelwa isilwane sakho. Isibonelo, i-GPS yayo isebenza emazweni angaphezu kwe-150, inomsebenzi wocingo lokuphepha lapho kwenziwa khona isexwayiso lapho inja yakho ishiya indawo oyichaze njengephephile futhi ungabona nokuthi mangaki amakhalori ayishisayo ukuyigcina ilungile .
Nokho, Njenganingi lale GPS, khumbula ukuthi, ngaphezu kwale divayisi, kuzodingeka ukuthi wenze isivumelwano senyanga, unyaka owodwa, emibili noma emihlanu ukwazi ukusebenzisa yonke imisebenzi, kanye nokulanda uhlelo lokusebenza lweselula yakho.
Isifundi se-Pet chip
I-chip ewusizo ne-microchip reader, ithuluzi elisetshenziswa kakhulu odokotela bezilwane kanye nabachwepheshe ukuze bakwazi ukufunda idatha kusuka kuma-chip chips. Isebenza kuzo zonke izinhlobo zezilwane ezifuywayo: izinja, amakati ... ngisho nezimfudu! Kodwa-ke, ayisebenzi ezilwaneni ezifuywayo njengezimvu noma amahhashi. Kumele ulethe umfundi cishe kumasentimitha ayi-10 noma ngaphansi ukusuka endaweni lapho i-chip ikhona ukuze idivayisi iyifunde bese okuqukethwe kuvela esikrinini. Ngaphezu kwalokho, ukushaja kulula kakhulu, udinga kuphela idivayisi ye-USB.
I-GPS enekhodi ye-QR
QR4G.com Ipuleti le-GPS ...
Mhlawumbe i-GPS eshibhile ongayithola. Yize ingenayo i-chip yezinja, kuyasiza kakhulu ukuthola inja yakho ngaphandle kwesidingo samadivayisi abiza kakhulu noma ngezinhlelo zokukhokha. Iqukethe ibheji enekhodi ye-QR. Uma ilahleka, umuntu oyithola kuphela kufanele athathe isithombe sekhodi ukuze abone idatha yesilwane (igama, ikheli, ukungezwani komzimba ...) nokuthi umnikazi athole i-imeyili enendawo lapho bekufundwa khona yenziwe.
Isifundi se-chip esincane ne-compact
Ngokungafani nemodeli ebesiyincoma phambilini, lesi sifundi se-chip silungele zonke izinhlobo zezilwane, hhayi izinja nje, ngoba futhi kuvumela ukukhonjwa kwezimvu noma amahhashi. Kulula kakhulu ukuyisebenzisa, ngoba kufanele usilethe eduze nendawo lapho i-chip izoyifunda khona. Ngaphezu kwalokho, ungayilayisha nge-USB futhi, lapho ikhompyutha yakho iyibona, ungaphatha amafayela afundwa yi-chip avela kufolda. Ekugcineni, isikrini sinokubonakala okuphezulu kakhulu.
I-chip yenja ye-GPS
Enye i-chip yezinja ongayengeza kukhola wesilwane sakho ukusigcina silawulwa ngaso sonke isikhathi. Le modeli ilwa nokuvuza futhi, ngaphezu kwalokho, ifaka imisebenzi ethakazelisa kakhulu, njengeGPS uqobo enendawo ebukhoma, kepha futhi nesexwayiso sokuphunyuka. Ayinamanzi afinyelela kumitha elilodwa futhi, njengemikhiqizo eminingi yalolu hlobo, ukuze isebenze idinga ukubhaliswa okungaba ngenyanga, ngonyaka noma kathathu. Ekugcineni, faka umlando nemizila inja eyilandele ngesikhathi sokuhamba.
Ikhola le-GPS elihlala isikhathi eside
KIPPY - EVO - Okusha ...
Futhi siqeda ngale GPS ethokozisayo, enedizayini enhle kakhulu futhi etholakala ngemibala emithathu, eluhlaza, ensundu noma epinki, ongayinamathisela kukhola wenja yakho ukuze itholakale unomphela. Ayinamanzi futhi, phakathi kwemisebenzi yayo ethakazelisa kakhulu, ejwayelekile kweminye imikhiqizo, njenge-GPS noma uthango lokuphepha, inezici zayo ezingayenza ibe inketho enhle kuwe, ngokwesibonelo, izindleko zokubhalisile, okuningi eshibhile kunamanye amamodeli (ngaphezulu nje kwe- € 3) noma isisindo, ngoba silula kakhulu.
Yini i-chip yezinja?
Kulesi sihloko sikunikeze ngezindatshana ezimbalwa ongazithola ku-Amazon nokuthi Bayakuvumela ukuthi ulandelele inja yakho usebenzisa i-GPS noma ufunde i-chip esivele bayifakile. Ngokusobala, umuntu akakwazi ngenjabulo ukufaka i-chip yokuhlonza enjeni yakhe, kepha kufanele aye kudokotela wezilwane.
Ama-chips, empeleni, zingama-microchips amancane afakwe ku-capsule afakwa ngaphansi kwesilwane sakho. Kwenziwa ngomgogodla olula, futhi azibangeli kungahambi kahle kwesilwane, futhi azibangeli ukungezwani komzimba. Esikhundleni salokho, kuyithuluzi eliphumelelayo ukuthola isilwane sakho uma silahleka.
Njengoba sishilo, i-chip ifakwe ngudokotela wezilwane. Lokhu kuqukethe imininingwane yomuntu, efana nekheli, igama kanye nenombolo yocingo, futhi kuvumela nokugcinwa kwerekhodi lazo zonke izilwane ezifuywayo. Inqubo ilula kakhulu: kuzofanele ugcwalise ifomu nedatha yakho, ezofakwa ku-chip, udokotela wezilwane uzokwazisa irejista futhi emasontweni ambalwa uzothola incwadi ekhaya lakho, incwadi eqinisekisa isilwane sibhalisiwe kanye ne-Identification yebheji enekhodi ye-QR ongayifaka kukhola wesilwane sakho njengokuvikela okungeziwe.
Ungacabanga kanjani kubaluleke kakhulu, kubaluleke kakhulu ukuthi ugcine imininingwane yakho yangasese isesikhathini, ngoba, uma kwenzeka inja yakho ilahleka, bangakubuyisela yona.
Kuthiwa isithombe sibiza amagama ayinkulungwane, futhi singasho okufanayo ngamaphesenti, lokho bonisa kahle amanye amaqiniso nezimo ngokubaluleka kwe-chip. Ngokuya ngocwaningo lwe-2019 Affinity:
Kuphela Izinja ezingama-34,3% ezicoshwe abavikeli ziphethe i-chip
Kulokhu, kutholakala babuyisele u-61% kubaninizo
Kodwa-ke, uma sibheka inani eliphelele lezinja ezifika ezindaweni zokukhosela, sKungenzeka kuphela ukubuyisa i-18%
Izinja ezisele ezingama-39% azikwazi ukuya emakhaya noma ngoba imindeni eyilahlile noma elahlekile ayilubambi ucingo noma ngoba inedatha engalungile (yingakho sishilo ukuthi kubaluleke kakhulu ukuthi irejista ivuselelwe)
Ingabe kuphoqelekile ukukhomba inja yami nge-microchip?
ESpain kuphoqelekile ukuthi kutholakale izilwane ezifuywayo, yize kungenjalo nge-chip (Yebo, kunjalo ngezinja ezingaba yingozi), ngokwesibonelo, ngokusebenzisa i-tattoo encane, ibheji ...
Nokho, Yize ngokomthetho kungadingeki ukuthi sitshale i-microchip esilwaneni, noma yimuphi umuntu olungile ofanele usawoti wakhe uzokwenza. Njengoba sishilo, i-microchip ibalulekile ukuthola isilwane sethu uma ilahlekile noma intshontshiwe, ngaphezu kwalokho, iyasiza ukuvimbela ukulahlwa. Ngamafuphi, asiphephile kuphela esilwaneni, kodwa siqinisekisa nenhlalakahle yaso, ngoba sandisa amathuba okubuyela ekhaya nomndeni waso.
Ungathenga kuphi amachips wezinja
Okulandelayo asikukhombisi kuphela lapho ungathenga khona izinja zamachips, kepha futhi sikutshela nokuthi ungathenga kuphi okokuhlonza okwehlukile ukugcina isilwane sakho silawulwa:
Ukukhomba inja yakho nge-chip engaphansi kwesikhumba, uzodinga ukuyiyisa kufayela le- udokotela wezilwane. Lokhu (noma lokhu) kuzophatha ukujova futhi kwaziswe irejista yedatha yesilwane. Le nqubo ingenziwa kudokotela wezilwane kuphela.
Uma ngaphezu kwe-chip ufuna ukuba nokunye izindlela ezingeziwe zokugcina inja yakho ihlolwe, kunezinye izinketho eziningi onazo:
En Amazon Uzothola imikhiqizo eminingi efana namakhola we-GPS, amapuleti, amapuleti ane-QR ... okuzokuvumela ukuthi ulawulwe yinja yakho futhi, uma kwenzeka iphunyuka, bangasiza kakhulu ukuyithola ngokushesha ngangokunokwenzeka .
Ngaphezu kwalokho, ku izitolo zezilwane eziku-inthanethi njenge-TiendaAnimal noma i-Kiwoko uzothola nenani elikhulu lamabheji nemigexo, yize zinokuhlukahluka okuncane. Zibuye zinikeze igama lomkhiqizo we-GPS elithandekayo elingaba wusizo kuwe.
Ekugcineni, kukhona imikhiqizo yefoni (njengeVodafone) noma i-GPS yemoto (njengoGarmin) abanikela nangezinhlobo zabo zamakhola we-locator. Kodwa-ke, zivame ukubiza kakhulu.
Ama-chip ezinja awumkhiqizo omuhle wokugcina inja yakho ikhonjwe uma kwenzeka ilahlekile, akunjalo? Sitshele, ngabe unolwazi oluthile nganoma iyiphi yale mikhiqizo? Ingabe inja yakho ine-chip? Ngabe ucabanga ukuthi lokhu kwanele noma ukhetha ukukuqinisa nge-GPS?
Fuentes: I-Fundación Affinity
Indlela ephelele ye-athikili: Inja yomhlaba » Izinja ezijwayelekile » Izesekeli zezinja » I-chip enhle kakhulu yezinja nokuba nesilwane sakho silawulwa kahle
Ungazihlanza kanjani izindlebe zenja